दुव्र्यसनबाट युवा पुस्तालाई रोक्नका लागि आमाहरुको सक्रिय भूमिका फलदायी ! – ebaglung.com
२०७३ फाल्गुन २१, शनिबार २२:४७	Top News, थप समाचार
बागलुङ, २०७३ फागुन २१ । उच्च तथा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्याथीहरु दिन प्रतिदिन दुव्र्यसनमा फस्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि आमाहरु सचेत हुनु पर्नेमा शनिबार बागलुङको मुलपानी आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिए छन ।
आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले सञ्चालन गरेको दुव्र्यसन विरुद्ध आमाहरु अभियान अन्तरगत बागलुङ नगर पालिका– ६ मुलपानीमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन । मावि तथा उच्च माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु साथी संगीको लहै लहैमा दुव्र्यसनमा फस्दै गएका छन् । खेल्ने, पढ्ने निहुँमा साथीभाईहरु जम्मा भएर दुव्र्यसनमा लाग्ने घटना पछिल्लो समयमा बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
दुव्र्यसन तितेपाती जस्तै बढेको छ, भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरुले दुव्र्यसनबाट युवा पुस्तालाई रोक्नका लागि आमाहरुको सक्रिय र सहयोगात्मक सहभागितामा जोेड दिए ।
आमाहरु सचेत बन्दा समाज दुव्र्यसनमुक्त बन्न सक्छ भन्दै सहभागीहरुले समाज परिवर्तनका लागि आमाहरुको नेतृत्व सबै क्षेत्रमा आवश्यक रहेको बताए ।
बेलैमा अभिभावक, समुदाय र विद्यालयले विद्यार्थीलाई सचेत गराई सही बाटोमा मार्गदर्शन गर्न नसके जीवन भर दुव्र्यसनमा फस्ने सहभागीहरुको भनाई थियो । दुव्र्यसन नियन्त्रणको लागी समुदाय र अभिभावकहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने लाग्नु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
कार्यक्रममा दुव्र्यसन विषयमा सहजीकरण गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यलय बागलुङ प्रहरी सहायक निरीक्षक विदुर तिमिल्सनाले उच्च तथा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी दुव्र्यसनमा फस्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै दुव्र्यसनबाट छोराछोरीलाई जोगाउन अभिभावकको सबै भन्दा महत्वपूाणर्् भूमिका हुने बताए ।
त्यस्तै, सहकारीको बारेमा जानकारी गराउदै आदर्श सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङका उपाध्यक्ष हुमा कुमारी जि.सी. (अञ्जु)ले सहकारी केबल पैसाको कारोबार गर्ने नभई समाजलाई सही बाटो हिड्न मार्गदर्शन गर्ने संस्था भएको बताईन् । दुव्र्यसन नियन्त्रणसंगै युवा पुस्तालाई आयआर्जन तथा समाज रुपान्तरणमा लाग्ने वातावरण बनाउनका लागि परिवार पहिलो पाठशाला भएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा करिब एक दर्जन वक्ताहरुले आफनो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
आदर्श सञ्चार सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष हुमा कुमारी जि.सी.(अञ्जु)को अध्यक्षता, सञ्चालक सदस्य योगेन्द्रराज पराजुलीको स्वागत र व्यवस्थापक भुपेन्द्र के.सी.को सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
प्रवास : कतारमा १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस एवं बृहत बनभोज सम्पन्न !